Inkcazo kunye neMimiselo yoLungiso kwiProse
Ukucaca luphawu lwesincoko okanye uhlobo lweprosethi oluthetha ngokufanelekileyo kunye nabaphulaphuli abajoliswe kuyo . Kwakhona kuthiwa ukuqonda .
Ngokubanzi, iimpawu zeprose ebhaliweyo ngokucacileyo ziquka injongo echazwe ngokucophelela, intlangano enengqiqo, izivakalisi ezakhiwe kakuhle, kunye nokukhethwa kwegama elichanekileyo. Isenzi: cacisa . Ukwahlukana ne- gobbledygook .
Ukususela kwisiLatin, "kucacile."
"Xa bebuzwa ukuba yiziphi iimpawu abazixabisa kakhulu ngokubhaliweyo, abantu abamele bafunde ngokubanzi umsebenzi bacacise ngokucacileyo phezulu kwoluhlu lwabo. Ukuba kufuneka batyale inzame enkulu ekucingeni intsingiselo yombhali, baya kuphelelwa yintlungu okanye ukucaphuka. "
(Maxine C. Hairston, Ukubhala ngokuphumelelayo .
"Bonke abantu bakhangwa ngobuhle beentetho ezicacileyo [kodwa] babhala kwisitayela seentyatyambo ngokuxelisa oku."
(UHenry David Thoreau, ocatshulwe nguJM Williams kwizifundo ezilishumi kuCacity and Grace , ngo-1981)
Into ebalulekileyo endizama ukuyisebenzisa kukuba ibhale ngokucacileyo njengokuba ndinako. Ndiyibhala kwakhona into enokuyenza ukuba icacise. "
(EB White, i -New York Times . Ngo-Agasti 3, 1942)
"Imikhwa embi ukunika abafundi [inkathazo] ingxaki engenasiphelo, ngoko kucacile ... kwaye ukucaca kukufezekiswa njani ngokubanzi ngokuthatha ingxaki kunye nokubhalela ukukhonza abantu kunokuba bahobise."
( ULucas, iSt . Cassell, 1955)
"Ngaluphi na uhlobo lokuthetha koluntu , njengaluphi na uhlobo loqhagamshelwano lwencwadi, ukucaca kukuhle kobuhle."
(Hughes Oliphant Old, UkuFunda Nokushumayela KweZibhalo.) Wm B. Eerdmans, 2004)
"Uluhlu okanye unesibindi, isiqalo esihle sifezekisa ukucaca . ukuqala kwecandelo leprose. Abanye abalobi babonakala bengafuni ukucaca, nokuba babhale ngokudibanisa ngenjongo .Abaninzi bangavuma kule nto.
"Omnye owenzayo wayeyi-Gertrude Stein engummangaliso-nangona-ukuba angayifani: 'Ukubhala kwam kucacile njengodaka, kodwa udaka luhlala kwaye lucaca imilambo egijimayo kwaye iphela.' Kulungile, yenye yeemvakalisi ezicacileyo awayezibhalela.
"Kwabanye abalobi abaninzi, ukucaca kubangelwa yintlonelo yomnqweno wokufezekisa ezinye izinto, ukugcoba ngesitayela okanye ukubethelwa ngolwazi. Kunye into yokuba umfundi avuyiswe yimpumelelo yombhali, enye xa ubumnandi bombhali ubonakala I-Skill, talent, inventiveness, bonke bangakwazi ukunyamezela kunye nokunyaniseka.
(Tracy Kidder noRichard Todd, "Isiqalo esihle kakhulu: Ukucaca." I-Wall Street Journal , ngoJanuwari 11, 2013)
Umngeni wokuBhala ngokucacileyo
"Kuhle ukubhala ngokucacileyo , kwaye nabani na onako ....
"Kakade, ukubhala kukusilela izizathu ezinzulu kunezivakalisi ezicacileyo.Siyabaphazamisa abafundi bethu xa singenakukwazi ukuhlela iingcamango eziyinkimbinkimbi, kwaye asinakuqiniseka ukuba ziyavuma xa singayithobeli imibuzo yabo efanelekileyo kunye nezichaso. zamabango ethu, ziququzelele izizathu zazo ezixhasayo ngokucacileyo, kwaye ziqinisekisile izizathu ezibonisa ubungqina obuchanekileyo , simele sichaze konke ngolimi olucacileyo nolumanyanisiweyo , umsebenzi obunzima kubalobi abaninzi, kunye neyona nto inzima kubantu abaninzi.
"Ingxaki eye yabangela izizukulwana zababhali abathi, endaweni yokuba bathethe iingcamango zabo ngokucacileyo nolwimi oluchanekileyo, bangazifihla kuphela kubafundi babo, kodwa ngamanye amaxesha nakwabo." Xa sifunda olo hlobo lokubhala kwimimiselo karhulumente, yibiza ngokuba ngumbuso ... Kubhalwe ngamabomu okanye ngokungakhathali, lulo ulwimi lokukhutshwa ukuba uluntu noluntu lwentando yesininzi alukwazi ukunyamezela. "
(UJoseph M. Williams, isitayela: Isiseko soBungqina noBawo . UAdisonison Wesley Longman, 2003)
"Kukho iindlela ezininzi zokucaca! Abaphulaphuli abaninzi abahlukeneyo ukuba baqonde! Xa ndikuxelela ukuba 'Cacile!' Ndikuxelela nje ukuba 'Uphumelele,' 'Fumana umyalezo.' Kwakhona, isiluleko esihle kodwa kungekhona uncedo olwenene. Andizange ndisombulule ingxaki yakho, ndiyifumene kwakhona. 'Ukucaca,' ngokubumba okunjalo, akubhekiseli kumazwi kwiphepha kodwa kuphendulwa kwimibuzo, eyakho okanye yomfundi wakho. umbhali kufuneka abhale amagama kwiphepha, kungekhona imibono engqondweni.
"Ukunxibelelana ngokuphumelelayo" okubonisa 'ukucaca' kubonisa ukuba yimpumelelo yethu ekufumaneni omnye umntu ukuba abelane ngombono wethu wehlabathi, imbono esiyibonisile ngokuyiqonda. Nokuba ubhale ukubhala ihlabathi kunye nokujonga enye. "
(URichard Lanham, uhlalutyo lweProse . Continuum, 2003)
Indlela Yokubhala I-Ad Effective, ngo-Ulysses G. Manning
UKurt Vonnegut ngokuBhala ngeSitayela
Imizekeliso: I-Exercise Brevity and Clarity
USamuel Johnson kwi-style yeBugbear
Iimigaqo Ezilishumi Zokubhala Ngokuphumelelayo
Isandi sokuBetha kwiNxibelelwano
Liyiphi Ibhola eliseNkonzweni?
Inzululwazi Yengqondo. Orthodoxy yenkolo
5 Abamongameli bamanje base-US abaphakamisa ukuTyala kweziTyala
Isikhokelo kwiintlobo ezahlukeneyo zeqhwa
Ubambe isiKhosi saseMbolc Candle for Solitaries
Ngokuphathelele iFayile yexesha leFayile () Umsebenzi
I-Charity: Inkulu kunazo zonke kwiiNkcazo zeTheological
I-Napalm kunye neAgent Orange kwiVietnam yaseVietnam